Vaovao - Ahoana no fahaizan'ny mpanamboatra fakantsary famantaran-tarehy amin'ny fampiharana an'io haitao io?
Momba an'i Ronghua
Module fakantsary rehetra
Module fakan-tsary 30W
Module fakan-tsary 100W
Module fakan-tsary 200W
Module fakan-tsary 300W
Module fakan-tsary 400W
Module fakan-tsary 500W
Module fakan-tsary 800W
Module fakan-tsary 1300W
Module fakan-tsary 1600W
Module fakantsary OEM
Module fakantsary USB
Module fakan-tsary USB rehetra
Module Fakan-tsary VGA USB
720P USB Module fakan-tsary
1080P Module fakantsary USB
Module fakan-tsarimihetsika 2K USB
4K Module Fakan-tsary USB
Module fakantsary USB OEM
Module fakan-tsarimihetsika binocular
Module fakan-tsary AHD
Module fakan-tsary WIFI
Fakan-tsary fakana sary
Lensa amin'ny fiara
Lens DVR fiara
Lensa famerenana fiara
Fiarovan-tsofa manodidina ny fiara
360 Lensa panoramic
Lens fanaovana scanner
Lensa Doorbell Visual
Lens Endoscope Capsule
VR Panorama Camera Lens
Tsy misy lantom-panovàna
Lensa zoro malalaka
Ireo singa elektronika
Ireo singa elektronika rehetra
Processeur sy mpanara-maso voahidy
IC peripheral Embedded
Inductors / Coil / Transformers
Fitaovana / Fitaovana
Hardwares / Solders / Accessories / Batterie
Buzzers & Speaker & Microphones
IoT / Modules amin'ny fifandraisana
Module azo ampiasaina
Birao sy fitaovana fampivoarana
Resistors / Potentiometers miovaova
Singa manelingelina andriamby
Haingo haingam-pandeha encoder IC
Off-Axis / On-Axis magnetika encoder IC
PCB Plate fanaovana
SMT Patch / Processing Plug-in
Ahoana no fahombiazan'ny mpanamboatra fakantsary famantaran-tarehy amin'ny fampiharana an'io haitao io?
Ny fakan-tsary momba ny tarehy dia mampiasa teknolojia biometrika mifototra amin'ny fampahalalana momba ny tarehy, mampiasa fakan-tsary na fakan-tsary mba hanangonana sary na rian-dahatsary misy tarehin'olombelona, ​​mamantatra sy manara-maso ny endrik'olombelona amin'ny sary avy eo, ary avy eo manatanteraka ny fanekena ny tarehy. Ity dia andiana teknolojia mifandraika, antsoina koa hoe fankasitrahana ny endrik'olombelona sy fanekena tarehy. Ny maodelin'ny fanekena endrika mahaleo tena dia mifototra amin'ny sehatr'asa fikirakirana MIPS haingam-pandeha, tafiditra ao anatin'ny algorithm fankasitrahana ny tarehy ao amin'ny indostria, ary ampiarahina miaraka amina sensor am-pahitana maso miaraka amin'ny zon'ny fananana ara-tsaina tsy miankina. Amin'ny alàlan'ny fifandraisana UART sy ny boribory peripheral tsotra, ny modely fankasitrahana ny tarehy dia tafiditra ao anatin'ny vokatra marani-tsaina avy amin'ny antoko fahatelo, ka ny vokatra avy amin'ny antoko fahatelo dia manana fahaiza-manao fanekena endrika mahery.
Mampiasa fakan-tsary na fakan-tsarimihetsika ny famantaran-tarehy mba hanangonana sary na renirano misy horonan-tsary, mamantatra sy manara-maso ireo tarehy ireo avy eo, ary avy eo dia manao andiam-pandefasana fampiharana mifandraika amin'ireo sarin-tarehy hita. Raha ara-teknika dia misy ny fanangonana sary, ny fametrahana ny endri-javatra, ny fanamarinana ny momba azy ary ny fikarohana sns. Raha fintinina dia mamoaka fiasa toa ny haavon'ny volomaso sy angulus oris amin'ny tarehy izy, ary avy eo ny vokatra dia azo avy amin'ny fampitahana endri-javatra.
Ny mpanamboatra fakan-tsary dia mahazo ny angon-drakitra manasongadina izay manampy amin'ny fanasokajiana ny endrik'olombelona araka ny famaritana endrika ny taova tarehy sy ny elanelana misy eo amin'izy ireo. Ireo singa asongadin-javatra dia mazàna dia ahitana ny halaviran'ny Euclidean, ny curvature, ny zoro, sns .. Ny tarehy dia misy maso, orona, vava, saokany sy ireo faritra hafa. Ny famaritana ara-jeometrika an'ireo faritra ireo sy ny fifandraisan'izy ireo eo amin'ny firafitra dia azo raisina ho lafiny iray lehibe amin'ny fanekena ny tarehy. Ireo fiasa ireo dia antsoina hoe endri-jeometrika.